"Matokia an’I Jehovah amin’ny fonao rehetra, fa aza miankina amin’ny fahalalanao." Habolana 3:5
"Aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorohoro ianareo." 1 Petera 3:14
“Apokalypse now” (Apokalypsy izao). « 2012, la fin du monde » (2012, faran’izao tontolo izao)… Lohateni-na sarimihetsika manambara ireo tahotra maro eo amin’ny mpiara-belona amintsika. Hamaroin’ny tontolo ankehitriny ireo fitandremana, nefa dia mitombo isa ny zava-mampatahotra : fampihorohoroana ; areti-mifindra maneran-tany, homamiadana, tsy fisian’asa, ady, fandotoan’ny herin’ny atôma, fiafaran’izao tontolo izao… ho tongan y fiafaran’izao tontolo izao, indray andro any, fa ny zavatra azo antoka izao ankehitriny izao dia hoe tsy maintsy hiseho eo anatrehan’iilay Andriamanitra Masina ny olona rehetra, mba hotsaraina. Ahoana no hahitana fiadanana, manoloana izany fe-potoana tsy azo ihodivirana izany? Ireo rehetra mino fa nodiovin’ny ràn’i Kristy ho afaka amin’ny fahotany dia tsy manan-tahotra intsony.
Manoloana ny zava-manahirana eo amin’ny fiainana, nefa, dia mety ho difotry ny tahotra ny Kristianina. Izany no amerimberenan’i Jesosy aminy ao amin’ny filazantsara hoe : « Aza matahotra » ; « Matokia ». hadinontsika fa ilay Rantsika Izay tia Azy (Romana 8 :28). Tadidio izany teny fampanantenana nomen’Andriamanitra izany, ario ny tahotra, fa aoka hatoky tanteraka ny Tompo. Henoy, ohatra, ny tenim-pitiavana nataon’i Jesosy tamin’i Jairo, ilay lehilahy ketrakaa nilazana fa maty ny zanany vavy : « Aza matahotra ; minoa fotsiny ihany, dia ho velona izy » (Lioka 8 :50).
Impiry impiry moa ny Tompo no niteny tamintsika hoe : « Aza matahotra » ? nohenointsika ve Izy? Efa niainan’I Davida izany fiadanam-po omen’n finoana ny hatsarampon’Andriamanitra izany: “Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko” (Salamo 27:1).